आईओएस .7.1.१ बगले अनुप्रयोगहरूलाई स्क्रीनबाट हराउँदछ आईफोन समाचार
हामी फेरि भेट्छौं IOS को साथ एक टेक्निकल समस्या। त्रुटिले प्रयोगकर्ताहरूलाई फोल्डर within आईओएस the को साथ स्प्रिboardबोर्डमा फोल्डरहरू भित्र राख्न अनुमति दिन्छ जुन सामान्यतया सम्भव छैन।
चरणहरूमा निश्चित क्रमको साथ फोल्डरहरूको भित्र फोल्डरहरूको यस समावेशीकरण पूरा गर्न, त्रुटि पनि अनुप्रयोगहरू हराउन सक्छ यसको सम्पूर्णतामा गृह स्क्रिनको।
सकरात्मक प्रयोग हुन सक्छ, उदाहरणका लागि, केहि एप्पल अनुप्रयोगहरू लुकाउन जुन तपाईंलाई थाँहा हुन्छ तपाईंले कहिले प्रयोग गर्नुहुने छैन (जस्तै कम्पास, भ्वाइस मेमो, आदि) जुन सामान्यतया हटाउन सकिदैन। अनुप्रयोगहरू तिनीहरू वास्तवमै मेटिएका छैनन् तपाईको आईफोन वा आईप्याडमा, यो दृश्य दृश्य ग्लिच हो जसले तिनीहरूलाई लुकाउँछ। यसको मतलब अनुप्रयोगहरू पुन: बुटमा पुन: देखा पर्नेछ तपाईंको आईओएस उपकरण।
यहाँ el डेमो भिडियो iDeviceHelpus द्वारा जो प्रदर्शन गर्दछ कि यो कसरी स्पष्ट रूपमा गर्ने।
को केही अनुप्रयोगहरू लुकाउनको लागि चरणहरू छन्;
तपाईंले फोल्डरमा लुकाउन चाहानु भएको अनुप्रयोगहरू राख्नुहोस्।
यो फोल्डर मुख्य स्क्रीनमा राख्नुहोस् जुन भरिएको छ।
फेरी फोल्डर बनाउनका लागि अर्कोमा कुनै पनि अनुप्रयोग तान्नुहोस्। जब फोल्डर एनिमेसन सुरू गर्न, छिटो फोल्डर तान्नुहोस् जुन तपाईं नयाँ सिर्जना गरिएको फोल्डर भित्र लुक्न चाहानुहुन्छ। तपाइँ द्रुत हुनुपर्दछ, समयको बारेमा विचार प्राप्त गर्न भिडियो हेर्नुहोस्।
नयाँ सिर्जना गरिएको फोल्डरबाट दुई अनुप्रयोगहरू हटाउनुहोस्।
त्यसो भए फोल्डबाट सबफोल्डरलाई तान्नुहोस् र यो पूर्ण रूपमा हराउनेछ। अनुप्रयोगहरू अब लुकेका छन्।
मैले पहिले भनेझैं अनुप्रयोगहरू पुन: बुट पछि पुन: आउनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» आईओएस .7.1.१ बगले अनुप्रयोगहरूलाई स्क्रीनबाट हराउँदछ
चाखलाग्दो, आईओएस .7.0.6.०. in मा मैले यसलाई प्रयास गरेको छु र मैले फोल्डरहरूमा फोल्डरहरू सिर्जना गर्दछु र आइकनहरू हटाउँदा यो हराउदैन।
Desko लाई जवाफ दिनुहोस्
iOS7 एप्पल को लागि शताब्दी को shit!
किनकि यो बाहिर आयो तिनीहरू केवल समस्याहरू ,,,, लाइभ iOS6 हुन्
स्कार्टे लियोन भन्यो
मैले मेरो आइपड टचमा .7.0.6.०. touch गरे र यदि मैले धेरै अनुप्रयोगहरू हटाए जुन मैले वास्तवमा प्रयोग गरेको छैन
स्कर्टे लियोनलाई जवाफ दिनुहोस्
एप्पल: तपाईं उहाँसँग लामो समयदेखि आउँदै हुनुहुन्छ c @ & #।% # मेरो लागि तपाईंको उत्पादनहरू सबै भन्दा राम्रो हुन्। तर त्यहाँ केहि छ जुन उनीहरूले लामो समय उपेक्षा गर्छन् र यो iOS हो। किन अझै अझै दोषहरू छन्? म बुझ्दिन, कि भन्नुको मतलब तिनीहरू यस मामलामा पहिले नै बूढा भइसकेका छन्। कति बर्ष (मेरो @ &% of को मेरो सामसु keyboard किबोर्डमा म ईनी टाइप गर्न सक्दिन) आईफोनसँग ??? र अब तिनीहरू क्यागमा आएका छन् @ &! Forstall को अभाव ध्यान देने योग्य छ। यी चीजहरू कामका साथ कहिल्यै घटित भएन ... उनीहरूलाई निश्चित समाधानको साथ आउने र यसलाई एकैचोटि समाधान गर्ने समय हो! किनकी तिनीहरूको एक विचार जोड्न धेरै पैसा खर्च हुन्छ। यसलाई गणना गर्नुहोस् !!!! उनीहरू अब आफ्नो आईओएस देखाउन सक्दैनन्। मेरो लागि, आईओएससँग अब कुनै आईओएस छैन। यो शुद्ध फोहोर हो। आशा छ कि मानिसहरूले यसमा खर्च गर्न छोड्छन् र तिनीहरूले आफूले लिएको गलत मार्गलाई महसुस गर्छन् ...
अलेजेन्ड्रो, पत्र "ñ" प्राप्त गर्न तपाईंले भर्खर "N" अक्षर समात्नु पर्छ र त्यस्तै भयो। एप्पल प्रयोगकर्ताहरू अनुमानित स्मार्ट छन् र वास्तविक सामसु technology टेक्नोलोजी कसरी प्रयोग गर्ने थाहा छैन।
वाडेरिकलाई जवाफ दिनुहोस्
भदेरिक: मलाई थाहा छ। यो मोबाइल संस्करणमा जुन मेरो सामसु g ग्यालेक्सी ch @ t मा देखाइएको छ, यो विकल्पले मलाई सक्षम गर्दैन। मैले कुञ्जी समातेको छु तर यसले काम गर्दैन। मसँग आईफोन s एस थियो जुन माथि वर्णन गरिएको कारणले गर्दा मैले यसलाई बेच्ने निर्णय गरें। अब, दुर्भाग्यवश म फेरि एक किन्न संकोच ...
DaniFdez ५ भन्यो
एलेजाद्रो, तपाई टिप्पणी गर्नुहुन्छ कि आईओएसaएक *** हो तर यस्तो देखिन्छ कि तपाईले त्यसलाई चलाएको पनि छैन (तपाई टिप्पणी गर्नुहुन्छ कि तपाईसंग सामसु Samsung छ)। ठीक छ, मसँग दुबै छ, र मसँग आईफोन छ जुनबाट आईफोन 7G जी बाहिर आयो, यो अझै पनि मलाई लाग्छ कि यसले सामसु than भन्दा धेरै राम्रो काम गर्दछ। र IOS3मलाई धेरै राम्रोसँग काम गरिरहेको छ। अभ्यासमा (वास्तविक जीवनमा), व्यक्तिहरूले आफैलाई दिनदिनै अरूमा फोल्डरहरू राख्न र हटाउन समर्पण गर्दैनन्, र आईओएस had को बग संस्करण .7.१ मा निश्चित गरिएको छ।
त्यो मेरो राय हो, तर म अरूको पनि सम्मान गर्छु।
DaniFdez95 लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो स्टार्टअपमा तलको पट्टी ग्रे र फोल्डहरू देखा पर्दछ, यो सामान्य हो वा म यसलाई कसरी पारदर्शी बनाउन सक्छु?
मलाई लाग्छ कि आईफोन on मा बार पारदर्शी छैन, तर हुनसक्छ अर्को प्रयोगकर्ताले यसलाई पुष्टि गर्न सक्दछ 😉
क्रिस्टोफर येशू भन्यो
नमस्ते, आईओएस .7.0.० बिटा मध्ये एउटामा, मलाई सम्झना छ कि त्यहाँ एक लुकेको विकल्प छ जुन तपाईं उपकरणबाट नेटिभ अनुप्रयोगहरू लुकाउन सक्नुहुनेछ र अन्यमा फोल्डरहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई लाग्छ कि यो बग होईन र एप्पलले यसलाई अधिक अनुकूलन अपरेटिंग प्रणाली गर्न अनुमति दिन्छ। वा यो पनि हुन सक्छ कि यो अहिले हो र तिनीहरूले यसलाई आईओएस for को लागि सुधार गरिरहेका छन् यसलाई राम्रोसँग गरिएको र सजिलो गर्नको लागि वा तिनीहरूले आईओएस .8.१.१ जस्ता भविष्यका अपडेटमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न समाप्त गर्नेछन्।
क्रिस्टोफर येशूलाई जवाफ दिनुहोस्
आईफोन On मा पट्टी र सबै कुरा पारदर्शी हुन सक्छ! तपाईंले भर्खरै सेटिंग्स-सामान्य-पहुँचतामा «तपाईंलाई कम्तीमा राखेको deactiv लाई निष्क्रिय गर्नुपर्दछ .... मसँग आईफोन have छ र यो धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ!
यो आईपड न्यानो [अवधारणा] को लागि आईफोन would हुनेछ